Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyda Ee Maanta Oo Salaasa Ah |
HomeCiyaarahaWararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyda Ee Maanta Oo Salaasa Ah
Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyda Ee Maanta Oo Salaasa Ah
November 10, 2020 Admin Ciyaaraha 0
Haddaba, waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa wararkii ay saaka oo Salaasaah qoreen wargeysyada waaweyn, waxaana xuquuqda wararkan iska leh isla wargeysyada aanu kasoo xiganay oo aanu magacooda war walba ku hor qornay.
Tottenham ayaa la siiyey fursad ay dib ugula saxeexan karto laacibka khadka dhexe ee reer Denmark ee Christian Erisksen oo 28 jir ah, waxaana sidaa usoo bandhigtay Inter Milan. (Football Insider)
Tottenham waxa kale oo loosoo bandhigay fursad kale oo ay dib ugula saxeexan karayso heshiis rasmi ah laacibka reer Wales ee Gareth Bale, iyadoo Real Madrid siinaysa €15 milyan oo Euro oo kaliya. (Mundo Deportivo)
Xiddiga PSG iyo Brazil ee Neymar oo 28 jir ah ayaa u sheegay kooxdiisa inuu doonayo inuu saxeexo heshiis cusub, isla markaana uu ka caawiyo kooxda reer France inay soo jiidato ciyaartooyo cusub. (Telefoot)
Difaaca bidix Bayern Munich iyo xulka qaranak Austria ee David Alaba oo 28 jir ah, ayaa albaabada u furay inuu u dhaqaaqo horyaalka Premier League, xilli ay danaynayaan Liverpool iyo Manchester City. (90min)
Difaaca midig ee Liverpool iyo xulka qaranka England ee Trent Alexander-Arnold oo 22 jir ah ayaa la filayaa inuu garoomada ka maqnaado muddo afar usbuuc ah kaddib dhaawacii kasoo gaadhay kulankii Manchester City ee Axaddii. (Daily Mail)
Manchester United waxay dib u dhigaysaa go’aanka ay ka gaadhayso goolhayaha reer Argentina ee Sergio Romero oo 33 jir ah, kaddib markii ay u muuqatay in qorshihii Dean Henderson ee kobcinta xirfaddiisu aanu wali dhamaanin, waxaanay ka fikiraysaa inay mar kale amaah ku dirto 23 jirkan bisha January. (ESPN)
Olivier Giroud ayaa ka fiirsanaya mustaqbalkiisa Chelsea, waxaana weeraryahankan 33 jirka ah lala xidhiidhinayo Inter Milan uu doonayaa inuu ka baxo Blues si uu u helo boos joogto ah oo ka caawiya inuu Faransiiska u icyaaro tartanka Euro 2020 ee dib loogu dhigay sannadka dambe. (Football London)
Manchester United ayaan heli doonin Ousmane Dembele bisha January, sababtoo ah Barcelona ayaa ku faro-adaygi doonta, kana ciyaarsiin doonta booskii uu ka dhaawacmay Ansu Fati. (Sport)
Isku-daygii Chelse ee ahaa inay lasoo saxeexato difaaca Nottingham Forest ee Anel Ahmedhodzic oo Malmo u ciyaara ayaa la joojiyey, kaddib markii uu aabbaha dhalay 21 jirkan reer Bosnia go’aan ku gaadhay in wiilkiisu aanu tegin Blues. (Sun)
Goolhayaha Liverpool ee Caoimhin Kellleher oo u dhashay Reblublic of Ireland ayaa rajaynaya in bisha January ay kooxdiisu ku bixiso amaah. (Iris Examiner)
Manchester United waxay amaah ku daraysa saddexdeeda ciyaartoy ee da’da yar ee wada 19 jirrada ah ee Ethan Galbraith oo u dhashay Norther Ireland, kana ciyaara khadka dhexe, Arnau Puigmall oo reer Spain ah, khadka dhexena ka ciyaara iyo Ethan Laird oo u dhashay England kana ciyaara difaaca.